Esory ny mari-drano: programa sy tranokala hanala azy | Famoronana an-tserasera
Encarni Arcoya | 09/09/2021 18:07 | Fitaovana famolavolana
Fitaovana avo lenta ny Internet. Azonao atao ny mampahafantatra ny sangan'asanao, na ho hitanao ny hiafaran'ny fangalarany azy ireo sy ny fahazoana laza avy amin'ny olon-kafa. Noho io antony io, mpanakanto marobe no mizotra amin'ny watermark mba hampakatra sary, sary ary sarin'ny asan'izy ireo amin'ny fikasana hampitsahatra ity 'halatra' ity. Fa rehefa vita ny lalàna dia vita ny fandrika. Ary misy fomba fanesorana mari-drano.
Tokony hataonay mazava tsara fa hampianatra anao izahay ny fomba fanesorana ireo mari-drano, fa tsy hoe lasa manimba ny olon-kafa ianao, mangalatra ny asany. Amin'ireo tranga ireo dia tsara kokoa ny miresaka amin'ilay olona mpanoratra.
1 Inona no mari-drano?
2 Ara-dalàna ve ny fanesorana ny fari-drano?
3 Ahoana ny fomba fanesorana mari-drano
3.1 Fanesorana mari-drano
3.3 Esory ny mari-drano misy Photoshop
3.5 Vokatry ny sary
Inona no mari-drano?
Ny fari-drano iray dia fantatra amin'ny anarany anglisy, watermark. Fitaovana iray hiarovana ny sangan'asan'izy ireo izany. Ny fampidirana an'io sary io sary, sary, sary, lahatsoratra ... izay mamaritra hoe iza no mpanoratra an'io sary io. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, miasa toy ny sonian'ny mpanoratra izy io ka tsy misy afaka mangalatra ny asanao.
Ireo mari-drano ireo dia miavaka amin'ny fahitana mangarahara na amin'ny loko mifanaraka amin'ny sarin'ilay sary, satria na dia natao ho hita aza izy io dia tsy natao hanakantsakanana na hisy fiantraikany amin'ny valin'ny sary.
Ara-dalàna ve ny fanesorana ny fari-drano?
Alohan'ny nilazanay taminao fa hampianatra anao ny fomba fanesorana mari-drano iray izahay. Fa manantena ihany koa izahay fa tsy hanao izany amin'ny tanjona hangalarana ny asan'ny hafa. Ka ara-dalàna ve ny tsy fanoratana marika sa tsia?
Tsy tsotra araka ny fieritreretanao azy ny valiny. Ary miankina amin'ny tanjona ananananao an'io sary io. Raha hofafanao izany satria hampiasainao amin'ny tanjona manokana (ohatra, manao T-shirt, mametraka peta-drindrina ao amin'ny efitranonao sns) dia matetika tsy misy olana amin'izany. Ankehitriny, ahoana raha toa ka tsy manao t-shirt izay tadiavinao dia ny mivarotra an'io sary io mba hahafahan'izy ireo manao t-shirt ary afaka misehoseho ianao? Ahoana raha hampiasainao amin'ny fonon'ny afisy eran-tany na ny fonon'ny boky ianao? Efa misy ny fikasana hahazo tombony amin'ny sary izay tsy anao, ary mety hametraka anao anaty olana satria ny mpanoratra mihitsy dia afaka manenjika anao amin'ny fampiasana ny sariny nefa tsy nahazo alalana taminy (ary tsy nandoa izany).
Ahoana ny fomba fanesorana mari-drano
Manaraka izany, hanome anao ohatra maromaro izahay programa izay afaka manala ny mari-drano ary asehoy anao ny sary iray izay hitovy amin'ilay manana marika, fa tsy misy azy io.
Ity fitaovana Apowersoft ity dia iray amin'ireo tsotra indrindra sy mora ampiasaina. Miorina amin'ny fanjavozavoana sy ny fanalefahana ka tsy hita intsony ireo mari-drano amin'ireo sary.
Tsotra be ny fizotrany:
Mampakatra ny sary amin'ilay fitaovana ianao.
Alokalokao ny faritra misy ny mari-drano.
Omenao hampiova fo. Hanomboka mandeha ho azy ilay fitaovana nefa tsy mila manao na inona na inona ianao. Afaka segondra dia hanome anao ilay sary tsy misy mari-drano izy.
Safidy hafa anananao, tena mora ampiasaina sy haingana dia ity. Mba hanaovana izany dia mila:
Ampidiro ny sary miaraka amin'ny mari-drano amin'ny programa.
Safidio ny ampahany misy ilay mari-drano.
Tsindrio ny bokotra Delete. Aza matahotra, tsy hamafana an'io boaty io izy io, fa hikarakara ny famafana azy kosa hamela ny sisa amin'ilay sary tsy mihetsika.
Tsy afaka milaza aminao izahay fa ho lavorary izy io, satria indraindray dia marina fa mety misy blur kely izay, fantatrao fa nisy zavatra tao, dia hanaitra anao amin'ny fahitana. Fa raha hitanao fa ratsy ny endriny dia azonao atao ny manandrana programa hafa.
Esory ny mari-drano misy Photoshop
Iray amin'ireo programa fanovana sary malaza eto amin'izao tontolo izao ny Photoshop. Ary mazava ho azy fa afaka manampy anao hanala ireo fari-drano ireo ny programa. Inona avy ireo dingana tokony horaisina? Mariho:
Ampidiro ao anaty programa ilay sary mba hisokafany miaraka aminy.
Safidio ny fitaovana Fanasitranana Brush.
Safidio ny "mifototra amin'ny atiny" ho toy ny safidy famenoana.
Ovao ankehitriny ny hatevin'ny borosy ary atombohy amin'ny sary inona ilay mari-drano. Vantany vao avoakanao izany dia ho hitanao fa manjavona ireo mari-drano tavela eo amin'ilay toerana nisy azy fotsiny.
Eny marina fa mety somary manjavozavo izy io, saingy tsara kokoa noho ny marika izany.
Fandaharana iray hafa azonao ampiasaina hanesorana ny mari-drano ity ity avy amin'ny Teorex. Mba hanaovana izany dia ireto no dingana tokony horaisina:
Sokafy miaraka amin'ny programa ilay sary.
Ampiasao ny fitaovana «Polygonal Lasso». Miaraka aminy dia mila misafidy ny faritra manontolo misy ny mari-drano ianao. Raha lehibe loatra dia tsara kokoa ny manao azy amin'ny fizarana roa na maromaro mba tsy hofenoinao pixel be loatra satria amin'izany dia hanana vokatra tsara kokoa ianao.
Vantany vao nofidinao io dia hisy boaty mena hiseho. Tsy maintsy tsindrio "Delete" ianao mba hikarakara ny programa amin'ny fanesorana ireo mari-drano.
Ny sisa tavela dia ny fitsimbinana ny valiny.
Io no iray amin'ireo fitaovana tsara indrindra hanalana marika, ka raha mampiasa ny tetika nomenay anao ianao dia hahazo valiny izay tsy hitovy amin'ny tena izy tamin'ny voalohany.
Vokatry ny sary
Raha tsy te hametraka programa amin'ny solosainao ianao ary mila ny hafa hikarakara ny fanesorana azy ho anao dia manana fitaovana an-tserasera maro azonao ampiasaina ianao. Ny iray amin'izy ireo dia Fotoefectos, mpamafa rano iray an-tserasera.
Ny dingana tokony hataonao dia:
Sokafy ny pejy web.
Ampidiro ny sary.
Lazao azy izay tianao hatao. Amin'ity tranga ity, ny zavatra tsy maintsy asehonao dia manondro fa te-hanala ilay mari-drano ianao.
Raha tsindrio manaraka dia hangataka aminao izy hanondro ny faritra misy ilay mari-drano tianao esorina. Tsindrio ny Delete ary segondra dia ho vonona ny hisintona ny valiny ianao.
Hay safidy bebe kokoa azonao ampiasaina izay ny valiny dia tsara kokoa na ratsy toetra kokoa. Hanan-kery ihany koa ny sary. Ka raha hitanao fa tsy maharesy lahatra anao ny valiny dia aza kivy ary manandrama fitaovana hafa hanala ny fari-drano ary aza tsikaritra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » Fitaovana famolavolana » Esory ny mari-drano